The PlayStation 3 (PS3) bụ a n'ụlọ video egwuregwu console, nke a na-mepụtakwara site Sony Computer Entertainment. Ọ bụ nọchiri PlayStation 2, dị ka akụkụ nke PlayStation usoro. Oge mbụ ya e wepụtara na November 11, 2006, na Japan. PS3 ihe karịrị a dị mfe Ịgba Cha Cha console. N'etiti ihe ndị ọzọ niile, ndị PS3-enyere gị na-ekiri fim na videos dị iche iche faịlụ formats. Dị ka PS3 imewe n'ihi video egwuregwu nwere elu arụmọrụ graphic ngwaike nke-enye gị na-egwu gị video faịlụ gụnyere 3D videos. Ị dị nnọọ mkpa a 3D akwado TV na iko.
Part 1: Ndi PS3 Play MP4?
Nkebi nke 2: Ntak ike My PS3 Play MP4?
Nkebi nke 3: tọghata MP4 ka PS3 Video on Windows na Mac site Iji Wondershare Video Converter Ultimate
Nkebi nke 4: Olee otú iyi MP4 Video on PS3?
Azịza nke ajụjụ a bụ ee na Ọ dịghị, ọ na-adabere na MP4 zuru ezu usoro. Anyị gbalịrị ahọrọ ihe ndị kasị ezigbo ihe mere ọ dịghị akwado MP4 faịlụ na PS3. Dị ka play ojii nkwado website, PS3 bụ naanị na-akwado na MP4 faịlụ nke na ofu na H.264 / MPEG-4 AVC elu profaịlụ (AAC LC). Mgbe na aka nke ọzọ MP4 bụ na akpa video imewe nke a na-nwere audio codec ma ọ bụ a dịgasị iche iche nke videos. Ọ bụrụ na ndị MP4 video na-adịghị kenyere na PS3 kwekọọ n'otú codec, mgbe ahụ, ọ bụ ikpe anyị ga-ada obere iji strimụ MP4 ka PS3 ma ọ bụ anyị ga-enwe ike na-egwu MP4 faịlụ na PS3 ọbụna ma ọ bụrụ MP4 n'ụzọ dị irè gbanwere ka PS3.
PS3 eze akwado MP4 faịlụ ma ka anyị pụrụ ịhụ ọtụtụ ikpe ebe onye ọrụ nwere ike ọ bụghị ha na-egwu MP4 faịlụ.
Ebe a bụ ụfọdụ nkịtị ajụjụ jụrụ site dị iche iche ọrụ:
Q1: Ndi PS3 egwu ụfọdụ MP4 video faịlụ?
Q2: ya mere m ji na-enwebeghị ike iji nweta ihe m PS3 ịghọta ma ọ bụ na-egwu ọ bụla video faịlụ site na mpụga isi iyi?
Q3: Olee ụdị video ke PS3 support? M na-ezi nkụda mmụọ.
Azịza nke ndị a niile ajụjụ bụ:
PS3 nwere ike igwu MP4 video faịlụ ma ha nwere nlezianya chọrọ maka ụdị usoro. The video kwesịrị encode na codec nke MPEG-4 AVC H.264 / XviD / DivX na ọdịyo codec nke AAC.
Dị ka anyị maara ka nwere ndị ụfọdụ ndị ọzọ MP4 videos codec nke ike-eji na ngbanwe video, dị faịlụ ndị unsupported site PS3 dị ka MPEG-4 asp.
The ndọtị nke ma faịlụ ga-abụ otu dị ka ".mp4" ma ma koodu na ụzọ dị iche iche.
Ya mere, ka ndabara PS3 play MP4 faịlụ ma naanị na codec MPEG-4 AVC H.264 / XviD / DivX na ọdịyo codec nke AAC. Ndị ọzọ MP4 video faịlụ ndị unsupported dị ka MPEG-4 asp.
Ya mere, na okwu dị mfe anyị pụrụ ikwu na, PS3 pụrụ ịbụ play .mp4 (akwado codec), ma ọ nwere ike ghara ịbụ (unsupported codec) egwu a MP4 faịlụ.
Ọ bụrụ na ị na-rapaara na unsupported ".mp4" faịlụ (dị ka MPEG-4 asp koodu)-egwuri egwu gị PS3. Ihe ngwọta kasị mma bụ na ị kwesịrị tọghata gị ẹdude faịlụ n'ime PS3 kwesịrị ekwesị MP4 faịlụ.
E nwere dị iche software nchịkọta maka converting videos. Ma oke bekee anyị na-eji Wondershare Video Converter Ultimate. Wondershare Video Converter Ultimate Bụ n'ezie ngwa ngwa na mfe iji n'ihi na tọghata gị videos. Ọ na-na-agụnye iche iche tupu kọwaa format maka Games, web, mobile na obere ngwaọrụ wdg Kedu inyere gị aka tọghata ozugbo gị kwughachiworom video kama iji ntuziaka ọnọdụ nke a kpọmkwem na ngwaọrụ dị PS3, Xbox ma ọ bụ PSP. Onye ọ bụla na ngwaọrụ ma n'elu ikpo okwu inwe ya kpọmkwem codec, nke bụ ike na-echeta.
Na-esonụ ngalaba ị pụrụ ịhụ otú iji tọghata unsupported MP4 n'ime PS3 MP4 format ole na ole clicks site na iji Wondershare Video Converter Ultimate. Eso nzọụkwụ aka-egosi gị otú iji tọghata gị videos.
Nzọụkwụ 1 agbakwụnye MP4 faịlụ dị ka ọsọ ọsọ
Ọgụgụ: 1 (Wondershare)
Wụnye na-emeghe "Wondershare Video Converter Ultimate" na gị usoro.
Mgbe ọ bụ egosi biko jide n'aka na ị na-Ntụgharị menu.
Mgbe ahụ Pịa na "Tinye Files" akara (ma ọ bụ)
Ị pụrụ nanị "Dọrọ" na "Idebe" faịlụ gị n'ime software
Mgbe ịpị "Tinye Files" ndị na-esonụ window ga-pụtara
Ọgụgụ: 2 (Wondershare)
Site gị "Nchọgharị" ị nwere ike họrọ unsupported MP4 faịlụ na
Nzọụkwụ 2 Nịm gị mmepụta format
Ọgụgụ: 3 (Wondershare)
Mgbe họrọ gị faịlụ
Ị nwere ike ịhọrọ ihe mmepụta usoro maka gị videos
Site dropdown menu, Pịa na "Ngwaọrụ". Mgbe nke a
Biko họrọ "Game"
Na site na Game họrọ gị egwuregwu console ụdị (dị ka na nke a PS3)
Nzọụkwụ 3 tọghata File
Ọgụgụ: 4 (Wondershare)
Mgbe họrọ gị mmepụta format ugbu a dị nnọọ pịa "tọghata" button.
Site na ịpị Open nchekwa ị ga-ahụ mmepụta faịlụ.
Nke a mmepụta faịlụ bụ n'ụzọ zuru ezu combatable na PS3 console.
Ị ga-nanị idetuo a faịlụ n'ime obere ebe nchekwa dị ka USB na mfe play ya.
Ọ bụ ike tọghata gị mgbasa ozi faịlụ na na na PS3. N'ihi na ọ chọrọ a otutu nchekwa media na oge achọrọ maka a nnukwu ego nke video data. N'ihi ya, ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị na-faịlụ na PC na-enuba ya site wireless rawụta na PS3. DLNA / UPnP na-aghọ smart na-egwu gị mgbasa ozi site na gị PC n'ime ihe ọ bụla iyi akwado ngwaọrụ.
Ya mere ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ego nke video data, ị nwere ike na-ekiri na nnukwu TV ihuenyo na gị PS3 site na PC gị na-eji Wondershare Video Converter Ultimate. Wondershare Video Converter Ultimate Amama gị PC n'ime a Media Server.
Eso nzọụkwụ eduzi gị banyere "Olee otú iji enuba gị vidiyo na PS3"
Nzọụkwụ 1 Jikọọ PC na PS3 na otu netwọk
Tupu anyị na-aga n'ihi nwetakwuo nkọwa e nwere otu ihe dị mkpa na ị ga-eme ka n'aka na gị PS3 na PC na-emi odude ke otu netwọk, nke mere na Wondershare Video Ntụgharị nwere ike na-akpaghị aka ịchọpụta gị na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2 Launch Wondershare Media Server
Ọgụgụ: 5 (Wondershare)
Ebe ị ga-Mwepụta "Wondershare Media Server" site gị "na-amalite menu" n'okpuru "Wondershare"
I nwekwara ike imeghe ya si "Wondershare Video Converter Ultimate" site na ịpị "Media Server"
Ọgụgụ: 6 (Wondershare)
Nzọụkwụ 3 Tinye gị MP4 faịlụ ka Media Server
Ọgụgụ: 7 (Wondershare)
Akpa Pịa na "Import" na
Họrọ gị faịlụ nke ị chọrọ enuba na gị PS3
Ugbu a pịa "Open" button
Ebe a gị faịlụ a ga-pụtara na window
Nzọụkwụ 4 Malite gụgharia
Ugbu a ndị na-esonụ screenshots si "PS3".
Mgbe Nzọụkwụ 3 now ego gị PS3 ma na-achọta Wondershare Video Converter Ultimate n'okpuru "Video"
Ị ga-họrọ Wondershare Media Server
Ọgụgụ: 8 (PS3)
N'elu na-esonụ screenshot si TV ihuenyo na-egosi nhọrọ na PS3
Ọgụgụ: 9 (PS3)
Mgbe họrọ Wondershare Media Server, họrọ nchekwa ebe ị mbubata faịlụ
Ị ga-họrọ gị faịlụ
Ugbu a enwe gị videos etolite gị PC gị nnukwu TV ihuenyo enweghị ejikọta ọ bụla USB.
Ọgụgụ: 10 (PS3)
Ọgụgụ: 11 (Wondershare) (Computer)
> Resource> MP4> Ndi PS3 Play MP4? Kedu ihe ọ bụ?